के छ प्रेममा त्यस्तो ?
दुनियाँमा सबैभन्दा बढी चर्चाको बिषयमा आएको केही कुरा छ भने त्यो हो ' प्रेम ' ।
सबै बिषयमा प्रेमको उपस्थिती भएको, सबैभन्दा बढी चर्चाको बिषयमा पनि 'प्रेम' नै रहेको साच्चै नै प्रेम भनेको के हो त । आउनुस यसको बारेमा खुलेर कुरा गरौ।
प्रेम भनेको हामी सबैको लागि प्रीय र प्यारो शब्द हो। जो कोहिलाई पनि ' प्रेम ' शब्द सुन्नेबित्तिकै आनन्द लागेर आउन सक्छ। प्रेम एक अदभूत अनुभव हो , प्रेम एक भावनात्मक सम्बन्ध पनि हो । प्रेमको बिषयमा बहस गर्दाखेरी भिन्न प्रकारका सोच बिचार भएका मानिसहरुले विभिन्न तरिकाले बुझ्ने गर्दछन। आखिर बहस नै गर्ने हो भने प्रेम के हो त ? के दुई प्रेम र प्रेमिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध भनेको प्रेम हो ? अर्थात के प्रेम दुई बिपरित लिङ्गी बिपरित हुने आकर्षण तथा अन्तरसम्बन्ध मा मात्र सिमित छ कि अरु बाह्य कुरामा पनि ? यो खुलेर बहस गर्नुपर्ने बिषय हो।
अधिकांश मानिसहरुको ' प्रेम ' शब्द सुन्नेबित्तिकै दिमागमा पानपाते आकारको चिजले उपस्थिती जनाईहाल्छ होला , हो यो सबैमा आउनु स्वभाबिक नै होला तर जब कुनै पनि महिला पुरुषको प्रेममा अर्थात कुनै पुरुष महिलाको प्रेममा परेकी हुन्छे तब मायाको जादु मायाको एक्सन मुटुमा होइन दिमागमा आउनुपर्ने हो । हुन त त्यो भनेको प्रेमको गराई र प्रेमको गहिराईमा भर पर्ने कुरा हो।
हो प्रेममा छुट्ने जसलाई ' ब्रेकअप ' पनि भनिन्छ कसैको न कसैको प्रेममा ब्रेकअप भैरहेको हुन्छ। यो हुनुको पछाडी धेरै कारणहरु भेट्न सकिन्छ जस्तै: प्रेम र प्रेमिका बिच बिश्वास कम हुनु, दुई अन्तरजातिय मानिस बिच प्रेम हुनु, एउटाको बानी अर्कोलाई मन नपर्नु , प्रेमी तथा प्रेमिकालाई उचित समय दिन नसक्नु आदि प्रेम टुट्ने केही उदाहरण हरु हुन। जसको प्रत्यक्ष असर दुबैमा परेको हुन्छ। आजभोली प्रेम सम्बन्ध छुटेकै कारणले गर्दा पनि कतिपय आत्महत्या र डिप्रेसनको समस्या कतिपयमा देखिन लागेको छ । यो प्रेमको साईड इफेक्ट भित्र पर्दछ।
सबै प्रेमी प्रेमिका हरुलाई ' प्रणय दिवस' को शुभकामना ।